Vaovao - Fomba 8 hamonoana ny volanao farany
1. Mihazakazaka haingana loatra na miadana loatra
Ny famaritana ny hafainganam-pandeha sy ny fahana mety ho an'ny fitaovanao sy ny fiasanao dia mety ho dingana sarotra, fa ny fahazoana ny hafainganana mety (RPM) dia ilaina alohan'ny hanombohanao mihodina ny masininao. Ny fihazakazahana fitaovana haingana loatra dia mety hiteraka haben'ny puce suboptimal na koa tsy fahombiazan'ny fitaovana loza. Mifanohitra amin'izany, ny RPM ambany dia mety miteraka fiviliana, famaranana ratsy, na fihenan'ny tahan'ny fanalana vy. Raha tsy azonao antoka izay RPM mety indrindra amin'ny asanao, mifandraisa amin'ilay mpanamboatra fitaovana.
2. Famahanana kely loatra na be loatra
Lafiny iray hafa manakiana ny hafainganam-pandeha sy ny fahana, ny tahan'ny fahana tsara indrindra ho an'ny asa dia miovaova arakaraka ny karazana fitaovana sy ny fitaovana ampiasaina. Raha mihazakazaka miadana loatra amin'ny tahan'ny fahana ianao raha mihazakazaka ny fitaovanao, mety hampidi-doza ny famerenanao ny puce sy ny fanafainganana ny fitaovanao. Raha mihazakazaka haingana be amin'ny taham-pahananao ny fitaovanao dia mety hiteraka fahatapahan'ny fitaovana ianao. Marina indrindra izany amin'ny fitaovana kely.
3. Fampiasana fikolokoloana nentim-paharazana
Na dia ilaina indraindray aza ny fikolokoloana nentim-paharazana na tsara indrindra, dia ambany kokoa noho ny fanamafisam-peo avo lenta (HEM) izany. HEM dia teknika masiaka izay mampiasa ny Radial Depth of Cut (RDOC) ambany ary ny Axial Depth of Cut (ADOC). Miparitaka mitovy amin'ny sisin'ny fanapahana izy io, manaparitaka ny hafanana ary mampihena ny mety tsy fahombiazan'ny fitaovana. Ankoatry ny fisondrotan'ny fiainana fitaovana mihombo, HEM dia afaka mamokatra famaranana tsaratsara kokoa sy tahan'ny fanesorana vy avo lenta ihany koa, ka mahatonga azy io ho fisondrotana fahombiazana amin'ny fivarotana rehetra.
4. Mampiasà fitazonana fitaovana tsy mety
Ny masontsivana mihazakazaka araka ny tokony ho izy dia tsy misy akony firy amin'ny toe-javatra mitazona suboptimal. Ny fifandraisana ratsy amin'ny milina-amin'ny-fitaovana dia mety hiteraka hazakazaka am-paosin-tanana, lozam-pifamoivoizana ary faritra tapaka. Amin'ny ankapobeny, ny isa bebe kokoa amin'ny fifandraisan'ny mpitazona fitaovana miaraka amin'ny hoditr'ilay fitaovana, dia azo antoka kokoa ny fifandraisana. Ireo mpihazona fitaovana Hydraulika sy shrink fit dia manome fampitomboana bebe kokoa noho ny fomba fanamafisana mekanika, toy ny fanovana shank sasany, toy ny helical's ToughGRIP shanks sy ny Haimer Safe-Lock ™.
5. Tsy mampiasa Geometry Helix / Pitch miovaova
Ny endri-javatra amin'ny karazana milina famaranana avo lenta, helix miovaova, na pitch miovaova, ny geometry dia fanovana an-kolaka ny géometry farany famaranana. Ity endri-javatra géometrika ity dia miantoka fa ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny fifandraisana amin'ny sisin-dàlana dia miovaova arakaraka ny fihodinan'ny fitaovana tsirairay. Io fiovana io dia mampihena ny resadresaka amin'ny alàlan'ny fampihenana ny harmonika, izay mampitombo ny fianan'ny fitaovana ary mamokatra vokatra ambony.
6. Fisafidianana ny palitao diso
Na eo aza ny vidiny somary lafo kokoa, ny fitaovana miaraka amin'ny paty havaozina ho an'ny fitaovanao dia afaka manisy tsy fitoviana. Ny firakotra maro dia mampitombo ny hamandoana, mampiadana ny fitaovan'ny fitaovana voajanahary, fa ny hafa kosa mampitombo ny hamafin'ny fanoherana sy ny hadalana. Na izany aza, tsy ny palitao rehetra no mety amin'ny fitaovana rehetra, ary ny fahasamihafana dia miharihary indrindra amin'ny fitaovana ferrous sy tsy ferrous. Ohatra, ny firakotra Aluminium Titanium Nitride (AlTiN) dia mampitombo ny hamafin'ny hafanana sy ny hafanana amin'ny akora vita amin'ny ferrous, saingy misy akony ambony amin'ny aliminioma, ka miteraka adhesion amin'ny workpiece amin'ny fitaovana fanapahana. Ny rakotra Titanium Diboride (TiB2) kosa dia manana fifandraisana ambany dia ambany amin'ny aliminioma, ary manakana ny fananganana sy ny fametahana puce ary manitatra ny androm-piainan'ny fitaovana.
7. Mampiasa halava lava halava
Na dia ilaina lava be aza ny fanapahana lava (LOC) amin'ny asa sasany, indrindra amin'ny famitana ny asany, dia mampihena ny hamafin'ny hery sy ny tanjaky ny fitaovana fanapahana. Toy ny fitsipika ankapobeny, ny LOC an'ny fitaovana dia tokony ho lava raha ilaina mba hahazoana antoka fa mitazona ny ankamaroan'ny substrate tany am-boalohany araka izay tratra ny fitaovana. Arakaraka ny maha LOC an'ny fitaovana no mora ahazoana mihodina, ary mihena ny fianarany fitaovana mahomby ary mampitombo ny vaky vaky.
8. Fisafidianana ny isa isa diso
Raha tsorina dia toa misy fiatraikany mivantana sy miavaka amin'ny fanatanterahana azy sy ny masontsivana mihazakazaka ny fanisam-pilazana ny flute an'ny fitaovana. Fitaovana iray misy isan'ny sodina ambany (2 ka hatramin'ny 3) manana lohasaha sodina lehibe kokoa sy fotony kely kokoa. Tahaka ny amin'ny LOC, ny substrate kely sisa tavela amin'ny fitaovana fanapahana, ny malemy sy ny henjana kokoa. Fitaovana iray manana isan'ny sodina avo (5 na mihoatra) voajanahary misy fotony lehibe kokoa. Na izany aza, tsy dia tsara kokoa hatrany ny fanisana flute avo. Ny fanisana flute ambany dia matetika ampiasaina amin'ny aliminioma sy fitaovana tsy ferrous, ampahany satria ny fahalemen'ireto fitaovana ireto dia mamela ny hafainganam-pandeha bebe kokoa amin'ny fitomboan'ny tahan'ny fanalana vy, fa koa noho ny fananan'ny poti-bolany. Matetika ny fitaovana tsy ferrous dia mamokatra puce kokoa sy lava kokoa ary fanisana sodina ambany dia manampy amin'ny fampihenana ny fametahana puce. Ny fitaovana fanisam-boninkazo avo kokoa matetika dia ilaina amin'ny fitaovana ferrous sarotra, na ho an'ny tanjaka fitomboany, ary satria tsy dia misy ahiana intsony ny famerenan'ny puce satria matetika ireo fitaovana ireo dia mamokatra puce kely kokoa.